ICook Yembula Izinto Ezigqokekayo Kungaba Inkampani yeFortune300 Ngayo uqobo | Ngivela kwa-mac
UCook wembula ukuthi ukugqokwa okungahle kube yinkampani yeFortune300 kukodwa
Emhlanganweni obubanjwe izolo wabaninimasheya abaningi balo mkhiqizo, umphathi we-Apple uTim Cook, unikeze imininingwane efanele mayelana nebhizinisi "lokugqokekayo" lenkampani yaseCalifornia.
UCook uqhathanise umnyango wakwa-Apple "wokugqokekayo" (yize engathandi ukubiza lezi zinhlobo zemikhiqizo ngale ndlela), equkethe zonke izinhlobo ze-Apple Watch, i-AirPods neBeats, nanoma iyiphi inkampani ezimele ngaphakathi kwe- I-Fortune 300Uma sibheka inzuzo elethwa yile mikhiqizo ku-Apple enamandla onke.
Njengokwesiko kwa-Apple, uCook akazange anikeze ngemininingwane eqondile yokuthengisa noma isabelo semakethe, kepha akekho ongabazayo ngalokho imakethe yalolu hlobo lomkhiqizo iyakhula, ikakhulu ngenxa yamawashi ahlakaniphile akwa-Apple, futhi yize bengene sekwedlule isikhathi kulo mdlalo.
Empeleni, lezi zinyanga ezi-3 zokugcina, unyaka wokuqala wezimali wenkampani, Ukuthengiswa kwe-Apple Watch kukhuphuke ngo-50%, futhi idatha iviki elihle emva kwesonto. Ngemuva kwamamodeli we-Apple Watch, ama-AirPod yiwona awinile, ngesabelo sokuthengisa siphakeme kakhulu kunalokho obekulindelwe, yingakho athengiswa ngephesenti elikhulu le-Apple Store.
Ngaphezu kwalokho, uCook wagcizelela kakhulu intuthuko ukwenza ngcono ukuhlanganiswa kwezempilo nokusetshenziswa namadivayisi ethu, futhi iqinisekisa ukuthi i-Apple izithatha ngokungathi sína kakhulu lezi zinhlobo zentuthuko ukuzisebenzisa ngokushesha ngangokunokwenzeka enkambisweni ngayinye yenkampani.
Mayelana ne-Apple Pay, uCook uqinisekisa ukuthi le sevisi entsha isetshenziswa ngaphansi kwalokhu obekubikezelwe endlunkulu yakwa-Apple, kepha kulindeleke ukuthi kufakwe phakathi nonyaka we-2018.
Yonke le datha enikezwa yi-CEO yenkampani esekwe eCupertino emhlanganweni wabaninimasheya isivumela ukuthi sibe nesithombe sobukhulu eqhuba i-colossus yobuchwepheshe babathengi emhlabeni jikelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » UCook wembula ukuthi ukugqokwa okungahle kube yinkampani yeFortune300 kukodwa
Ngicabanga ukuthi kuhle kakhulu ukuthi inakho lokho kuthengiswa nokuthi iya iba ngcono, kepha kufanele babheke ukuthi bangazinciphisa kanjani izindleko ukufinyelela abasebenzisi abaningi.
Ngokuya ngemibiko yabathengi, zombili iSonos One neGoogle Home Max zizwakala kangcono kune-HomePod
ICaja Rural ne-Evo Banca Inteligente, sekuvele njengamabhange alandelayo e-Apple Pay Spain